Siyakwamukela Ukuze Simatech
I Pathfinder Of Silk-technoloy
Simatech Inc. Inkampani biotech ukugxila yokukhiqiza of ngokwemvelo etholakala evundisayo kasilika fibroin biomaterials nokuthuthukiswa state-of-the-art amasu for ezihlukahlukene izicelo bezokwelapha. Besilokhu ukusizakala emasimini bemishini yezokwelapha futhi elawulwa izidakamizwa ukulethwa ngokusebenzisa kasilika fibroin njengoba eziyisisekelo eceba impahla. Nge ubuchwepheshe core futhi uchungechunge imikhiqizo nokuphathelene isakhiwa, Simatech uzokwenza umnikelo unqobe izifo futhi bathuthukise izinga lokuphila. Ngo Simatech, senza konke okusemandleni ethu ukuze kusekelwe imisebenzi yocwaningo kanye nentuthuko yakho ngokunikela imikhiqizo ejwayelekile futhi ngokwezifiso usilika fibroin. Siphinde ukwamukela abalingani engaba emhlabeni wonke ukuhlola amasimu amasha kwesicelo nokuthuthukisa imikhiqizo emisha kanye nathi.
Kungani Kufanele Cabanga Imikhiqizo Yethu?
B izinto asic
Imikhiqizo usilika fibroin enikeziwe kungenziwa ngqo esetshenziswa amakhasimende njengoba izinto zokusetshenziswa eziyisisekelo ukuze kuqhutshekwe bhila ahlukahlukene izinto usilika fibroin.
E nenqubo ssential
Ukubolekisa ngezindodla yokukhiqiza nge izindawo eziphambili futhi inqubo zifane; Ezimisiwe ukulawula izinga ohlelweni.
S Umthombo ilk
Silk, odumile impahla yendwangu of China, kungenziwa kalula futhi ngokwanele etholwe njengoba kungaba imifece iluhlaza noma Imicu yotshani kusetshenzwe kusuka izifunda eningizimu umfula iYangtze River, eyaziwa ngokuthi "ezweni kasilika" Sekuphele iminyaka engaphezu kuka-3,000.
T echnology kanye patent
Esohlwini zisekelwe ubuchwepheshe core ne ematheni amalungelo empahla okuqondene Simatech Inc.